यूनिभर्सल पावरको आईपीओमा पूर्ण आवेदन | गृहपृष्ठ
Home लगानी यूनिभर्सल पावरको आईपीओमा पूर्ण आवेदन
on: February 19, 2019 लगानी
आवेदन दिने बुधवार अन्तिम दिन
फागुन ७, काठमाडौं (अस) । यूनिभर्सल पावर कम्पनीको आईपीओमा पूर्ण आवेदन परेको छ । माघ २५ देखि सर्वसाधारणलाई जारी गरेको कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने बुधवार (फागुन ८) अन्तिम दिन रहेको छ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले मंगलवारसम्म १ लाख १ हजार ९ सय ६ जना आवेदकबाट ८९ लाख ४१ हजार २ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको जानकारी दिएको हो ।
कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिने छिटो अवधि माघ २९ सम्म तोकेकोमा सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि ढिलो अवधि फागुन २६ गतेसम्म समय तोकेको थियो । तर फागुन ७ गर्ने सम्ममा नै पूर्ण आवेदन परेकाले फागुन ८ गते विक्री बन्द गर्न लागेको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियलाई पहिलो चरणमा शेयर विक्री गरी दोस्रो चरणमा ८६ लाख ७४ हजार ४ सय ९२ कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाई जारी गरेको हो ।
यस अघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानियका लागि २१ लाख ३ सय ५० कित्ता आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम ५० लाख कित्तासम्म शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । इक्रा नेपालले यो आईपीओको लागि आधारभूत पक्षलाई औषतभन्दा तल रहेको जनाउने ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १३ करोड रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ जारी गरेपछि पूँजी रू. २ अर्ब १० करोड पुग्नेछ ।
यूनिभर्सल पावरको साधारण सभा सम्पन्न, आगामी वर्ष ८% लाभांश दिने कम्पनीको प्रक्षेपण